बिहानै उठ्दा सधैं थ’कित हुन्थिन् श्रीमती, एकदिन क्यामेरामा रेकर्ड भयो सबै वास्तविक्ता !! – Khabar28media
बिहानै उठ्दा सधैं थ’कित हुन्थिन् श्रीमती, एकदिन क्यामेरामा रेकर्ड भयो सबै वास्तविक्ता !!
एजेन्सी। आमा के हुन्? एक महिला आफ्नो बच्चाकालागि कसरी आफ्नो जिन्दगीसँग सम्झौता गर्छिन्? यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ यो समाचारमा पाइनेछ। आज हामी तपाइँलाई अमेरिकाको लस एन्जलसकी मेलानिया डार्नेलका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। जो विहान उठ्दा फ्रेश हुनुको साटो थकित हुन्थिन्। श्रीमतीको अवस्था देखेर उनका श्रीमान पनि चिन्तित हुन्थे।
वास्तवमा मेलानिया विहान उठ्दा किन सधैं थाकेकी हुन्थिन्? मेलिानियालाई भने आफ्नो थकानका विषयमा सबै कुरा जानकारी थियो। मेलानियाले भविष्यमा अहिलेको थकान स्मरण गर्न योजना बनाइन्। योजना अनुसार मेलिानियाले आफ्नो कोठाको माथिपट्टि सीसी टिभी क्यामेरा लगाइन्। क्यामरामा रेकर्ड भएको भिडियो मेलानियाले तीन महिना पहिला शेयर गरेकी थिइन्। भिडियोमा मेलानिया आफ्ना बच्चा सुताउने क्रममा आफू भने सुत्न पाउँदिन थिइन्। जसका कारण दिनभर उनी थकित हुन्थिन्।
मेलानियाका तीन सन्तान छन्। जसमध्ये एक जना मात्र दश महिनाका छन्। उनको नाम माइलो हो। मेलानियालाई धेरै दुख पनि माइलोले नै गर्छन्। माइला बाहेक मेलानियाको दुई वर्षकी छोरी पनि छन्। जसले कयौं पटक राति आमालाई दुख दिन्छिन्। तर एक आमाको सुन्दर पक्ष के हो भने आफ्ना बच्चालाई खुशी राख्न आफू रातिको निन्द्रा मात्रै होइन, पूरा जीवन नै दाउमा राख्न तयार हुन्छन्। मेलानियाले कोठमा सीसी टिभी क्यमरा लगाएर भिडियो बनाउनुको अर्थ आमा राति ओछ्यानमा पल्टिए पनि आरामसँग निदाउन सक्दिनन् भन्ने देखाउनु हो। यो भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ।
Previous Article फेरी के हुँदैछ नेपालमा ? दोलखा भीमसेनलाई आयो पसिना, अहिलेसम्मका घटना यस्ता छन् !!
Next Article अत्यन्तै दु:खद खबर: उदयपुरमा एक हप्ताभित्र एउटै परिवारका दुई छोरा र आमाको मृ’त्यु !!